कलेज छनोटमा ध्यान नदिँदा हीनताबोध हुन सक्छ
कलेजहरूको भौतिक साधन र सुविधा मात्र हेरेर कलेज छान्ने प्रचलन गलत हो । बाहिरी देखाइ–बुझाइको आधारमा छान्नुभन्दा कलेजको आधारभूत सुविधा, शैक्षिक गुणस्तर, सम्बधित विषय शिक्षकको दक्षता÷योग्यता लगायतमा पनि ध्यान दिनुपर्छ । कलेजको आकर्षक विज्ञापन हेरेर होइन, त्यहाँकोे व्यवस्थापकीय अवस्था लगायतबारे जाने–बुझे...
काठमाडौं । एसईई परीक्षामा ३ दशमलव ४५ जीपीए ल्याएकी इरिस एकेडेमी काठमाडौंकी जुनु दुलाल यतिबेला कलेज छान्न व्यस्त छिन् । विज्ञान विषय पढ्ने सोचअनुसार अहिले उनी कलेजमा पुगेर कोर्स, शुल्क, सुविधालगायतको व्यवस्थाबारे बुझ्न थालेकी हुन् । विषयअनुसार जीपीए नम्बर पुगेका विद्यार्थी यतिबेला विज्ञान, व्यवस्थापन...
कुन संकाय किन पढ्ने ?
काठमाडौं । एसईई परीक्षाको नतीजा सार्वजनिक भएसँगै विद्यार्थी र तिनका अभिभावक कक्षा ११ को पढाइका लागि राम्रा उच्चमाविको खोजीमा छन् । आफ्ना छोराछोरीको चाहनालाई साथ दिँदै अभिभावकहरू अहिले आफै पनि कुन विषय पढ्दा राम्रो हुने र अध्ययनपछि रोजगारीको सम्भावना कस्तो छ भन्ने परामर्शमा पनि जुटिरहेका छन् । एसईईमा...
वीरगञ्ज पब्लिक कलेज : थोरै खर्चमा गुणस्तरीय शिक्षा
वीरगञ्ज । १८ वर्षदेखि वीरगञ्जमा सञ्चालित वीरगञ्ज पब्लिक कजेल (बीपीसी)ले थोरै खर्चमा गुणस्तरीय र व्यावहारिक शिक्षालाई मूल उद्देश्य बनाएको छ । २०५७ सालदेखि सञ्चालनमा आएको यो कलेजले व्यवस्थापन संकायको उच्च शिक्षामा आपूmलाई नमूना व्यवस्थापन कलेजको रूपमा स्थापित गर्न सफल भएको छ । करीब २ दशकदेखिको अथक पर...
एसईईको जीपीए र पढ्न पाउने विषय
असार १३, काठमाडौं (अस) । गएको जेठ २५ र २६ गते सञ्चालित कोरियाली भाषा परीक्षाको नतिजा सार्वजनिक भएको छ । परीक्षामा सहभागीमध्ये १२ हजार ९ जनाको नाम प्रकाशित भएको छ । सार्वजनिक भएको नतिजा अनुसार औद्योगिक क्षेत्रमा ९ हजार १३३ र कृषि तथा पशुपालन क्षेत्रमा २ हजार ८७६ जना उत्तीर्ण भएको वैदेशिक रोजगार विभाग...
एसईईको नतीजा सार्वजनिक : साढे १७ हजार विद्यार्थीले ल्याए ३.६० देखि ४ जीपिए
काठमाडौं । २०७५ सालको माध्यमिक शिक्षा परीक्षा (एसईई)मा देशभरका सामुदायिक तथा निजी विद्यालयबाट १७ हजार ५८० विद्यार्थी ३ दशमलव ६ देखि ४ जीपीए ल्याउन सफल भएका छन् । परीक्षाका कुल सहभागी ४ लाख ५९ हजार २७५ विद्यार्थीमध्ये उक्त संख्याले यो नतीजा हासिल गरेको बिहीवार सार्वजनिक परीक्षाफलले देखाएको हो । प्रक...
एसईई परीक्षा : १७ हजार विद्यार्थीको ‘ए प्लस’ (कति जीपीएको कुन ग्रेड ?)
असार १२, काठमाडौं । राष्ट्रिय परीक्षा बोर्ड, परीक्षा नियन्त्रण कार्यालय सानोठिमीले बिहीवार सार्वजनिक गरेको २०७५ सालको माध्यमिक शिक्षा परीक्षा, कक्षा १० (एसइई) परीक्षाको नतिजामा नियमिततर्फ १६ हजार ८८२ विद्यार्थीले जीपीए ३.६० देखि ४ (ए प्लस) ल्याएका छन् । कार्यालयले गत वर्षदेखि संघीय संरचनाअनुसार गत च...
ताप्लेजुङका उत्कृष्ट सामुदायिक विद्यालय पुरस्कृत
ताप्लेजुङ (अस) । ग्रामीण शिक्षा तथा वातावरण विकास केन्द्र (रिड नेपाल)ले जिल्लाका उत्कृष्ट विद्यालयलाई पुरस्कृत गरेको छ । विगत १२ वर्षदेखि शिक्षाको क्षेत्रमा विभिन्न गतिविधि सञ्चालन गर्दै आएको उक्त संस्थाले शैक्षिक सिकाइमा उत्कृष्ट यहाँका तीन विद्यालय, दुई विद्यालय व्यवस्थापन समिति र तीन शिक्षकलाई हा...